OnePlus dia manolotra fihenam-bidy hatramin'ny 280 euro raha mividy ny OnePlus 6 | Androidsis
Ny paikady fandefasana modely vaovao saika isaky ny 6 volana, angamba ho an'ny mpampiasa sasany an'ny orinasa OnePlus Tapitra nandreraka azy ireo aho, satria ny terminal misy azy dia tratran'ny maodely vaovao natolotry ny orinasa tao anatin'ny herintaona. Lavitra ny mandao an'io fomban-drazana io, ny orinasa dia manohy miloka amin'ny tsingerin'ny fanavaozana fohy toy izany.
Saingy toa nanomboka nahatsikaritra fahamaizana iray tamin'ireo mpanaraka azy izy. Na mety ny vidin'ny fanombohan'ny OnePlus 6, izay haseho amin'ny 16 Mey any London, avo loatra ka ny mpanaraka ny nentin-drazana ny orinasa misafidy ny hijoro fa tsy hanavao ny terminal intsony. Mba hisorohana ireo toe-javatra roa ireo dia manolotra fihenam-bidy hatramin'ny 280 euro ho an'ny OnePlus taloha ny orinasa raha mividy ilay OnePlus 6 vaovao.
Toy ny mahazatra dia miondrika foana ireo mpanamboatra ary mihoatra ny azo inoana izany ity sarany ity dia ho an'ny OnePlus 5T ihany, ny terminal farany navoakan'ny orinasa tamin'ny faran'ny taona lasa, raha mbola lavorary izy io, ka raha manana maodely antitra ianao dia azo inoana fa hihena be io isa io. Ity safidy ity dia mety indrindra ho an'ireo izay tsy te hanasarotra ny fiainany mivarotra ny terminal any amin'ny tsena faharoa.
Raha misafidy ny hivarotra ny taloha OnePlus isika, azo antoka fa mahazo vola bebe kokoa isika, indrindra raha miresaka momba ny OnePlus 5T, terminal izay manana vidiny 499 euro isika, na dia any amin'ny magazay an-tserasera Aziatika aza dia ahitantsika azy amin'ny vidiny ambany. Mba hanararaotana an'ity fihenam-bidy ity dia tsy maintsy alefantsika ny terminal antsika mba ho sarobidy. Maharitra roa herinandro eo ny tombana, hahazo tapakila fihenam-bidy hampiasainay hividianana ny OnePlus 6 vaovao amin'ny alàlan'ny pejy OnePlus ofisialy.
Mikasa ny hanararaotra an'ity tolotra ity ve ianao sa aleonao mivarotra ny OnePlus taloha amin'ny tsena faharoa?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » OnePlus dia manolotra fihenam-bidy hatramin'ny 280 euro raha mividy ny OnePlus 6 izahay
Araraoty ny fihenam-bidy 50% amin'ny taha Vodafone One Light
Ny vidiny sy ny fisian'ny LG G7 ThinQ any Espana